Pam Georgel အားဖြင့် Libra အကြားအမြင်ရ Tarot စာဖတ်ခြင်းဇွန်လ 2017 - အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ်
အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ် > ဗီဒီယိုများ > Pam Georgel အားဖြင့် Libra အကြားအမြင်ရ Tarot စာဖတ်ခြင်းဇွန်လ 2017
Pam Georgel အားဖြင့် Libra အကြားအမြင်ရ Tarot စာဖတ်ခြင်းဇွန်လ 2017
Megan မေလ 29, 2017 ဗီဒီယိုများTagged 2017, ကြောကျသလငျး, ဇွန်လ, ပေါင်ချိန်, ကောင်းမွန်သော, မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း, အဘိဥာဏ်, စာဖတ်ခြင်း, အမှတ်လက္ခဏာ, tarot, ရာသီခွင်4 မှတ်ချက် Pam Georgel အားဖြင့် Libra အကြားအမြင်ရ Tarot စာဖတ်ခြင်းဇွန်လ 2017 အပေါ်
2017 အဘို့အသင်တို့၏နိမိတ်လက္ခဏာအဘို့အကြှနျုပျ၏အနေတော်တစ်နှစ်တာအကြားအမြင်ရ Tarot ဖတျရှုပွီးယ်ယူရန်: https://vimeo.com/ondemand/midyear2017readings
မင်္ဂလာပါနှင့်ငါ့ရုပ်သံလိုင်းမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ငါ့နာမကို Pam သည်နှင့်ငါ clairaudient, clairvoyant, စိတ်ချင်းစာနာမှုနားလည်မှုရုပ်သံလိုင်းနှင့်အကြားအမြင်ရအလတ်စားမိပါတယ်။ ငါလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော် client များအတွက်ပညာရှင်ပီသစွာအဘိဥာဏ်ဖတ်လုပ်နေတာအတွေ့အကြုံ 14 နှစ်ကျော်ရှိသည်။ လည်း FB ပေါ်မှာငါ့နောက်သို့လိုက် ကျေးဇူးပြု. : အဆိုပါ Lucky မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း LLC နှင့် twitter ရောက်ရှိနေသော: @theluckymermaid နှင့်ငါ့က်ဘ်ဆိုက်: www.theluckymermaid.com
Jaden Winfree says:
မေလ 29, 2017 မှာ 12: 34 နံနက်
ကျေးဇူးတင်ပါသည်တစ်ဦးသန်း Pamela! ဇွန်လမင်္ဂလာ !!! ချစ်ခြင်းမေတ္တာအများကြီး, Jaden XXXOOO
ဒီလအချက်ပေါ်ဒါ။ ဘတ်ရွတ်ဘို့သင့်ကိုသိပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ❤
Jazzy ဂျက်ဇ်ဂီတ says:
ပွိုင့်တွင်! အကြှနျုပျ၏ဟောင်းကိုနှစ်သက်နေမကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူကကျွန်မကိုတူသော Libra ပါပဲ။ ထိုအခါငါအရေးယူမှု၌ငါ့ကွာရှင်းစက္ကူသတ်မှတ်ထားရန်လိုအပ်ပါဘူး။ သငျသညျ Pam ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။